thinzar's blog: တွေ့ရကြုံရ
ဒီတစ်လလုံး အလုပ်တွေ ရှုပ်ပြီး အရှုပ်တွေ လုပ်နေတာနဲ့ ဘလော့ဂ်တောင် update မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ ဒီလထဲမှာ conference တစ်ခု သွားတက်ဖြစ်တယ်။ ပြောရရင် ပထမဆုံးအကြိမ် conference တက်ဖူးတာဘဲ။ အထူးအဆန်းတွေရော အမှတ်တရတွေကော ကြုံခဲ့ရတယ်။ အမှန်တော့ ကျမ အကြောက်ဆုံးက presentation ဘဲ။ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်ဆို ဘယ်တော့မှ ပိုက်ဆံ အကုန်ခံပြီး conference သွားတက်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် academic field မှာ လူတွေက ဒါတွေကိုဘဲ လက်ခံတာဆိုတော့လည်း…
လူတွေ အများကြီးနဲ့တော့ တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ အစားအစာဘဲ။ နှစ်ရက်ထဲစားလိုက်တာ နှစ်လလောက် ပြန်ချရမယ့် ကိုလက်စထရောတွေ တက်သွားတယ်။ ဦးနှောက် အရမ်း အလုပ်လုပ်ရင် ဗိုက်ဆာတယ်တဲ့။ :D ကျောင်းစာနဲ့ ခြောက်လလောက် ဝေးပြီး အလုပ်ထဲရောက်နေလို့လား မသိဘူး သူတို့ ဘာတွေ ပြောနေလည်းဆိုတာ မနည်း နားထောင်ယူရတယ်။ အများအားဖြင့် Master တို့ PhD ကျောင်းသားတွေ professor တွေ present လာလုပ်ကြတယ်။ ကိုယ့် paper က undergraduate ပရောဂျက် ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ကြောက်တာပေါ့။ ဘာမေးခွန်းတွေ တက်လာမလဲဆိုတာဘဲ ရင်တမမနဲ့။ ကိုယ့်အရှေ့က presentation တစ်ခု နှစ်ခု ကြည့်ထားမိတော့ တစ်ချို့က သူများကို မေးခွန်းမေးတာက နည်းနည်း ဘယ်လို shoot down လုပ်ရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားနေကြသလိုဘဲ။ ပြီးတော့ conference ထုံးစံက paper တစ်ခုကို တစ်ယောက်ဘဲ present လုပ်ရတယ်ဆိုတာ မသိတော့ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းနဲ့က ထုံးစံအတိုင်း သူ့အပိုင်း ကိုယ့်အပိုင်း ခွဲပြီး ပြင်ဆင်ထားတာ။ ကိုယ့်အလှည့်လည်းရောက်ရော chairperson က တစ်ယောက်ဘဲ present လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ လန့်သွားတာဘဲ။ ကိုယ့်အပိုင်းဘဲ ကိုယ်ဖတ်ထားတာလေ။ နောက်တော့လည်း chairperson နဲ့ ဈေးဆစ်ရင်း သူကလည်း သနားပြီး တစ်ယောက်တစ်ဝက် ပေးပြောလိုက်တယ်။ အမြဲတမ်း နည်းနည်းလေးတော့ ကမောက်ကမ ဖြစ်လိုက်ရမှ။ တက်လာတဲ့ မေးခွန်းတွေတော့ ဖြေနိုင်လိုက်လို့တော်သေးတယ်။
ကိုယ့် presentation က ပထမနေ့မို့ တော်သေးတယ်။ မဟုတ်ရင် သူများလုပ်တာကြည့်လေ ကြောက်လေနဲ့ နောက်ဆုံးနေ့သာဆိုရင်တော့ လုပ်ရဲတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အလှည့်ပြီးသွားတာနဲ့ စိတ်ပေါ့သွားပြီး တစ်ခြား presentation တွေကို လိုက်နားထောင်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ကဘဲ Jack of all trades ဖြစ်နေလို့လား မသိဘူး။ session အားလုံးကို ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် လှည့်နားထောင်မိတယ်။ Mobile & wireless communications, high performance network and protocol, software engineering and agile development, knowledge-based technologies etcetera etcetera ပေ့ါ။ ဟိုဟာလည်း စိတ်ဝင်စားသလိုလို ဒီဟာလည်း စိတ်ဝင်စားသလိုလိုနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ဘာကိုမှ ဟုတ်တိပါတ်တိ စိတ်မဝင်စားတာ ခက်နေတယ်။ ဒီပုံအတိုင်းဆို ဘယ်တော့မှ မာစတာ ဆက်ဖြစ်မလဲ မသိဘူး။ ကိုယ် စိတ်ဝင်စားတာကိုဘဲ လုပ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မဝင်စားလည်း ဒါကိုလုပ်ဆိုရင်တော့ ပြီးအောင် လုပ်မိမှာဘဲ။ စိတ်လေတယ်။
Conference သုံးခု တစ်နေရာထဲမှာ လုပ်တာဆိုတော့ nanotechnology conf. ကို လာတက်တဲ့ မြန်မာ ဆရာ တစ်ယောက်နဲ့ ဆရာမ တစ်ယောက်ကို tea break မှာ တွေ့တယ်။ မမျိုးချစ် ဆိုတော့ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် မြန်မာတွေ့ရင် ဝမ်းသာတာပေါ့။ tea break တွေမှာ မပျင်းရတော့ဘူး။ စကားပြောဖို့ အဖေါ် ရသွားတယ်။ ခင်ဖို့ တော်တော် ကောင်းကြတယ်။
မတွေ့တာကြာတဲ့ တတိယနှစ်တုန်းက ဆရာမတစ်ယောက်နဲ့လည်း တွေ့ခဲ့တယ်။ သူကပြောတယ်။ နောက်ငါးနှစ်မှာ ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲ ဆိုတာ စဉ်းစားပေါ့။ အလုပ်လုပ်တာတော့ လုပ်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မာစတာ ဆက်တက်ဖို့လည်း စဉ်းစားဦး။ အလုပ်က အခုမှ လုပ်စဆိုတော့ အလုပ်ထဲမှာ ပျော်နေမှာဘဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီအလုပ်တွေဟာ နောက် နှစ်နှစ် သုံးနှစ်ပြီးရင် ကိုယ့်အတွက် repetitive work တွေ ဖြစ်သွားပြီ။ အသစ်အသစ် learn လုပ်စရာ သိပ်မရှိတော့ရင် ငြီးငွေ့သွားမှာဘဲ တဲ့။ ဆရာမ ဆိုတော့လည်း academic လိုင်း မဟုတ်ရင် research လိုင်းကို လိုက် ဖို့ အကြံပေးတာပေါ့။ စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီး ရလိုက်တယ်။
နှစ်ရက်တိတိ လည်း သွားပြီးရော information overload ဖြစ်သွားတာလားမသိဘူး လူက တော်တော် မူးနောက်သွားတယ်။ တတိယတစ်ရက်တော့ သွားမတက်နိုင်တော့ဘူး။ နောက်ဆုံးတစ်ရက်အတွက် ပေးထားတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ အစားအသောက်ကိုတော့ နှမြောတယ်။ :D တွေ့ရကြုံရတာလေးတွေကတော့ အမှတ်တရပေါ့။
Reader နဲ့တင် အားမရလို့ ဒီအထိလာပြီး ဖတ်လိုက်တယ်ဗျာ။ နောက် Comment လည်း ရေးရင်းပေါ့။ ပျောက်နေတဲ့ ကာလ အတွင်း အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီး ရခဲ့တယ်ပေါ့ မသဉ္ဖာ။
ကောင်းတယ်ဗျို့။ အတွေ့အကြုံ ဆောင်းပါးလေးတွေ။
Programmer တွေ အတွက်ကတော့ အတွေ့အကြုံအသစ် ဆိုတာ ခေါင်းစားစရာ ပြဿနာ အသစ်တစ်ခုကို ရင်ဆိုင်လိုက်ရတာ၊ ဒါမမဟုတ် ဖြေရှင်းလိုက်ရတာလို့ပဲ ထင်မိသဗျ။ ခေါင်းစားဖွယ်လေးတွေ ပေါ့။ =)
29/5/08 3:47 PM
ညီမလေးရဲ့ အတွေ ့အကြုံက တကယ့်ကို တန်ဖိုးရှိပါတယ်...။ မာစတာ ဆက်တက်ပါလို့လည်း အားပေးပါတယ်..။
29/5/08 6:14 PM
I am happy tonight for surfing your blog again. I know nothing about IT. But I am keen to learn it. Honestly, whenever i visit your blog, i got something that is useful for me. Thanks for your useful posts.
1/6/08 4:05 AM
မှောဆရာ>> အင်း..ဟုတ်တယ်။ လူတိုင်းကတော့ ခေါင်းစားစရာတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခုကို စောင့်ပြီး ဖြေရှင်းရင်းနဲ့ဘဲ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ကုန်ဆုံးနေရတာဘဲ။ မှောဆရာလည်း အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ။ =)
မလေးမ>> အစ်မ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှ သဉ္ဖာ မာစတာ ဆက်တက်မယ်။ :D နောက်တာနော်။ အခုလို အားပေးတာ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မရယ်...
shang lawt>> Your comment indeed makes me feel sufficient. Hearing this, i felt that at least it's worth blogging. :-) cheers! wish u can be IT pro soon..
2/6/08 4:57 PM